Ganacsiga ayaa ku abaal mariyay $ 1.36 milyan deeqaha iskaashiga daryeelka carruurta ee bulshada - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Ganacsiga ayaa ku abaal mariyay $ 1.36 milyan deeqaha iskaashiga daryeelka bulshada ee bulshada
Ganacsiga ayaa ku abaal mariyay $ 1.36 milyan deeqaha iskaashiga daryeelka bulshada ee bulshada
Wadashaqeynta Gobolka ee sanduuqa Safe Start waxay siisaa 16 deeqo ururada samafalka ah, dowladaha hoose iyo degmooyinka adeega waxbarashada si loo horumariyo qorshooyinka ku saleysan bulshada ee lagu balaarinayo awooda daryeelka caruurta
OLYMPIA, WA - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa maanta shaacisay $ 1,368,000 oo deeqo ah oo la siiyay 16 hay’adood si loo maalgaliyo dadaallada iskaashi ee lagu ballaarinayo awoodda daryeelka carruurta ee 14 bulsho oo ku baahsan gobolka. Deeq-bixiyeyaashu waxay ka heli doonaan 50% abaalmarinta deeq-lacageedka guud ee gobolka ee ay maamusho Ganacsiga, iyo 50% ciyaar ka socota Sanduuqa Badbaadada Bilowga ah ee Ku Meelgaarka Dhaqaalaha Caafimaadka iyo Soo Kabashada.
Helitaanka daryeel caafimaad oo qiimo jaban oo tayo leh ayaa lagama maarmaan u ah soo kabashada dhaqaalaha gobolkeenna. Kumanaan waalidiin ah oo ku nool Washington ama waxay bixinayeen in ka badan inta ay awoodi karaan, ama waxay la halgamayeen sidii ay u heli lahaayeen tas-hiilaad daryeel cunug oo tayo leh iyo barnaamijyo u dhow halka ay ku nool yihiin ama ka shaqeeyaan ka hor COVID-19, ”ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown oo xiganeysa xog laga helay ilmo dhawaan la siidaayay. daryeel daraasadda qiimeynta warshadaha u xilsaaray gobolka Kooxda Wada Shaqeynta ee Daryeelka Carruurta taasi oo muujisay in shantii waalidba mid kamid ah uu diiday dalab shaqo ama dalacsiin ah sababo la xiriira arimaha daryeelka caruurta.
Dhibaatada caafimaadka dadweynaha waxay ka dhigeysaa la'aanta awoodda daryeelka cunugga xitaa inay sii muuqato, iyadoo si ku-meelgaar ah oo joogto ah loo xirayo xarumo fara badan sida waalidiintu ugu soo laabanayaan shaqada oo dugsigana dib loogu bilaabayo. Brown ayaa xustay in dhibaatooyinka ka jira daryeelka caruurta da'da iskuulka ay muhiim u tahay deeq bixiyaasha si loogu daro qiimeynta baahidooda maxaliga ah iyo howlaha qorshaynta. Qiimaynta warshaduhu waxay bixisaa xog adag iyo macluumaad sahan waalid si looga caawiyo hagidda gobolka iyo iskaashiyada ku saleysan bulshada ee mustaqbalka.
Wareegan koowaad ee deeqaha iskaashiga bulshada ayaa maalgelin doona mashaariicda illaa 30ka Juun, 2021 ee Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jefferson, Island, King, Klickitat, Pend Oreille, King, Snohomish, Spokane, Stevens, Thurston iyo Whatcom county. Wareegii labaad ee codsiyada deeqaha ayaa furmay Agoosto 17 wuxuuna xirmi doonaa Sebtember 11, 2020 at 5 pm PST. Macluumaad dheeraad ah iyo dhammaan agabyada dalabka waa la dhajiyaa halkan.
Wareega koowaad deeq bixiyaasha iskaashiga daryeelka caruurta waa:
Magaalada Airway Heights, $ 57,200 - Mashruuca Daraasadda Fursadda ee Daryeelka Carruurta ee Airway Heights oo u adeegta magaalada Airway Heights iyo bulshada ku nool West Plains ee Gobolka Spokane
Shirkadaha Maskaxda Beesha, $ 100,000 - Mashruuca Iskaashiga Daryeelka Carruurta ee aagga oo u adeegaya Aagga xaafadda ee Waqooyi-bari Spokane ee Gobolka Spokane
Shabakada Beesha Cowlitz, $ 60,000 - Warbixinta Helitaanka Daryeelka Carruurta ee u adeegaysa Gobolka Cowlitz
Isbahaysiga Beesha Granite Falls, $ 60,000 - Mashruuca Iskaashiga Smart Start oo u adeegaya bulshada Granite Falls ee Degmada Snohomish
Akadeemiyadda Greater Trinity, $ 98,500 - Qiimeynta Daryeelka Carruurta iyo Ballaarinta Mashruuca Qorsheynta Adeegga ee u adeegaya Everett iyo bulshooyinka dugsiga degmada Mukilteo ee Gobolka Snohomish
Deegaanka Island, $ 100,000 - Mashruuca Iskaashiga Daryeelka Carruurta ee Island County
Jasmin Wasaaradaha, $ 63,300 - Tayada, Dhaqan ahaan Ku Haboon oo La Awoodi Karo Daryeelka Carruurta / Barashada Hore ee Qoysaska Madoow mashruuc u adeega xaafadaha ku yaal Spokane
Jefferson Healthcare, $ 91,500 - Daryeelka Mustaqbalka: Iskaashiga Daryeelka Carruurta ee Bariga Jefferson County
Pend Oreille Adeegyada Dadweynaha ee Degmada, $ 100,000 - Pend Oreille mashruuca Daraasadda Suuragalnimada Daryeelka Carruurta
Shabakadda Caawinta Barashada Wanaagsan, $ 100,000 - Isbahaysiga Afrikaanka-Maraykanka ee Waxbarashada Hore oo u adeegaya bulshada ku nool Seattle iyo King County
Waxqabadka Bulshada ee Reer Miyiga, $ 100,000 - Mashruuca Deeqaha Qorshaynta Xarunta Carruurnimada Hore ee Colville Valley oo u adeegaya Stevens County
Taageerada Barashada Hore & Qoysaska, $ 100,000 - Iskaashiga Daryeelka Carruurta ee Southwest Washington: Kordhinta mashruuca Daryeelka Xaafadaha oo u adeegaya Vancouver, County Clark
Golaha Horumarinta Dhaqaalaha ee Thurston, $ 60,000 - Mashruuca Iskaashiga Daryeelka Carruurta ee Grays, Mason iyo Degmada Thurston
United Way ee Degmada Whatcom, $ 82,500 - Iskaashiga Daryeelka Carruurta ee mashruuca Degmada Whatcom
Barnaamijyada Waxqabadka Washington Gorge, $ 100,000 - Guddiga Daryeelka Carruurta ee Degmada Klickitat - Mashruuca Daryeelka Carruurta ee Goldendale oo u adeegaya bulshada weyn ee Goldendale
Ururka Horumarinta Bulshada ee White Center, $ 95,000 - Mashruuca Isbahaysiga Carruurta ee White Center oo u adeegaya White Center iyo bulshooyinka North Highline ee degmada King
“Deeqda Iskaashiga Daryeelka Carruurta swuxuu nagu taageerayaa inaan maqalno codadka qoysaskeena, oo ay ku jiraan kuwa matalaya dad aan tiro yareyn. Maaddaama aan aqoonsanno caqabadaha, waxaan si wadajir ah u qaabeyn doonnaa taageerooyinka ka caawiya qoysaska inay u diyaariyaan carruurtooda inay guuleystaan, ”ayay tiri Dr. Karin Manns, Kaaliyaha Kormeeraha Guud, Dugsiga Degmada Granite Falls iyo Wada-Guddoomiye, Kooxda Granite Falls Community Coalition Early Childhood Team. Isbahaysigu wuxuu u isticmaali doonaa deeqda lacageed qiimeynta baahiyaha iyo caqabadaha, wuxuuna diyaarin doonaa ururada bulshada si ay uga dhigaan daryeelka carruurta iyo adeegyada horumarineed inay u sahlanaato qoysaska dakhligoodu hooseeyo, ee aan haysan adeegyada bulshada bariga Snohomish.
Ganacsigu wuxuu aasaasay Sanduuqa Badbaadada Bilaashka ah iyadoo lala kaashanayo Seattle Foundation si loo taageero dib-u-soo-kabashada dhaqaalaha ee cudurka COVID-19 ee faafa iyada oo diiradda la saarayo caafimaadka bulshada iyo sinnaanta. Sanduuqa Badbaadada Bilowga ah wuxuu aqbalaa tabarucaadka shakhsiyaad ku deeqaya, aasaaska iyo shirkadaha, oo ay ku jiraan tabarucaad ilaa Dhamaan WA, oo ah barxad ballaadhan oo deeqsi ah oo dhiirrigelisa sababaha iyo lacagaha bulshada si loogu taageero shaqaalaha, qoysaska iyo bulshada ay saamaysay COVID-19 guud ahaan gobolka Washington.
“Bixiyeyaasha xanaanada cunuggu waa lafdhabarta bulshadayada. Waxay suurtogal ka dhigayaan in waalidiinta iyo daryeelayaasha ay ka shaqeeyaan jiidaha hore iyagoo wax baraya oo daryeelaya kuwa ugu yar ee wax barta gobolka. Xiisaha baaxadda leh ee deeqdani waxay muujineysaa baahida loo qabo in wax laga qabto dhibaatooyinka awoodda daryeelka carruurta ee gobolka oo dhan, gaar ahaan meelaha iyo bulshooyinka aan adeegga lahayn, ”ayuu yiri Tony Mestres, Madaxweynaha iyo Agaasimaha Guud ee Seattle Foundation. Hay'adda Seattle Foundation waxay qabataa ololaha All In WA, iyadoo wakiil ka ah ku dhowaad 50 sababood iyo maalgelinta bulshada, oo ay ku jiraan Sanduuqa Badbaadada Badbaadada.
“Waa muhiim in dhammaan carruurta ku nool gobolkeennu ay helaan daryeel weyn inta lagu jiro sannadaha ugu horreeya ee noloshooda, maadaama ay gacan ka geysan karto dejinta aasaaska barashada mustaqbalkooda, dabeecaddooda, iyo caafimaadkooda. Waxaan ku faraxsanahay inaan taageerno wadashaqeyntaan gaarka ah ee xaruunta codadka bulshada, gacan ka geysata caawinta dib u soo kabashada dhaqaalaha, isla markaana ujeedkeedu yahay in la daboolo baahida qoys kasta oo u baahan daryeel, ”ayuu yiri Andi Smith, Agaasimaha Fulinta ee Washington ee Ballmer Group.
← Ganacsiga wuxuu soo dhaweynayaa agaasimaha cusub ee isgaarsiinta Dadaalka gobolka ee lagu ballaadhinayo khadka taleefanka ee miyiga wuxuu ka helayaa wadajir Wadaag Caafimaad →